आज लाग्दैछ सूर्य ग्रहण, नेपालबाट देखिन्छ ?
आज (आइतबार) सूर्य ग्रहण लाग्दैछ । तर यो ग्रहण नेपाल, भारत लगायतका देशबाट भने देख्न सकिँदैन ।
अंग्रेजी वर्ष २०१९ मा तीनवटा सूर्य ग्रहण लाग्नेछ । जसमा सबैभन्दा पहिलो सूर्य ग्रहण आजको दिन लाग्दैछ । नेपाली समय अनुसार ग्रहण साँझ ५ बजेर १९ मिनेटमा सुरु भएर ९ बजेर ३८ मिनेटसम्म रहने छ । यस ग्रहणको कूल अवधि लगभग ४ भन्टा १४ मिनेटको हुनेछ ।
यो ग्रहण धनु राशि तथा पूर्वाषाढा नक्षत्रमा हुनेछ । यो आंशिक सूयै ग्रहण हुने छ र नेपालमा देखिने छैन । यसका कारण ग्रहणको बेलामा पालन गरिने सुतक सम्बन्धी नियमको पालन गर्न आवश्यक छैन ।
यो ग्रहणमा सूर्यको संयोग शनि र बुध र चन्द्रसँग बन्नेछ । सूर्य शनि तथा चन्द्रको प्रभाव भएका कारण दुर्घटनाको सम्भावना बन्छ । साथै राजनीतिक रुपमा भयंकर उथलपुथल हुने सम्भावना छ । यस ग्रहणको प्रभाव लगभग एक पक्षसम्म रहेनछ । ग्रहणका समयमा केही काम गर्न बन्देज छ ।
ग्रहणका बेला के गर्न हुन्न ?
ग्रहणका समयमा खाना खान बर्जित गरिएको छ । ग्रहणका बेला व्यक्तिको पाचन शक्ति कमजोर हुन्छ ।
गर्भवती महिलालले ग्रहणको छायाँबाट बच्न आवश्यक छ । ग्रहणको छायाले गर्भमा रहेको शिशुमा असर पुग्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ ।
ग्रहणको बेलामा कुनै शुभ कामको शुरुवात गर्दा असफलता प्राप्त हुन्छ ।
ग्रहणका बेला दात माझ्ने, नङ काट्ने लगायतका काम गर्न हुन्न ।
ग्रहणको बेलामा पूजा उपासना गर्न नहुने मान्यता रहेको छ ।
ग्रहणका बेला सुत्न हुन्न ।